တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ ယခင်အစီအစဉ်ဟောင်းများပေါ့ဒ်ကတ်စ်မိုဘိုင်းလ် ဗွီအိုအေမြန်မာ - YouTube နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း မျက်မှောက်ရေးရာ / ဒီမိုကရေစီရေးရာ
This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one တခြား ဖတ်စရာများ စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ NLD ဝင်မဝင် KAF နဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ မြန်မာအစိုးရရဲ့  လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အတိမ်အနက် (၂၆) နှစ်အကြာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် More Articles စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း (၁၀-၂၅-၂၀၁၄)
တပတ်အတွင်း မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းသတင်းများ။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ အာရှနဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးပါမှုနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို East-West Center ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Satu Limaye နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။ မကြေးမုံရဲ့  အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ နဲ့ ကမ္ဘာ့တလွှာ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများအကြောင်း သက်တံရောင်သတင်းလွှာစတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးများ ... ထိပ်တန်းသတင်းများ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် မြို့ခံနဲ့ လှုပ်ရှားသူ ပဋိပက္ခဖြစ် မာလီ အီဘိုလာသေဆုံးမှု ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ကုလ အကူအညီပို့ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အားထုတ်သူကို သတ်တဲ့အမျိုးသမီး အီရန်ကွပ်မျက် စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန် ဟောင်ကောင် လူထု ဆန္ဒ္ဒခံယူဖို့ စီစဉ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နျူကလီယား အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကန်လိုလား အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အားထုတ်သူကို သတ်တဲ့အမျိုးသမီး အီရန်ကွပ်မျက် စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် မြို့ခံနဲ့ လှုပ်ရှားသူ ပဋိပက္ခဖြစ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ကို မလိုချင်၊ မျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေးကိုသာ လိုချင်တယ် မာလီ အီဘိုလာသေဆုံးမှု ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ကုလ အကူအညီပို့အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများ စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန်အများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း (၁၀-၂၅-၂၀၁၄) မတူတာလေးတွေ မြန်မာတခွင်